शिलापत्र संवाददाता काठमाडाैं, ८ फागुन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र मानिएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले स्वीस कम्पनीका एक जना एजेण्टसँग कमिसनको बार्गेनिङ गरेकोे अडियो सार्वजनिक भइसकेको छ । बाँस्कोटा ती व्यक्ति हुन्, जसलाई तपाईंले आफ्नै घरमा प्रश्रय दिएर राख्नुभएको छ ।
अडियोमा उनले खुलेर आर्थिक कमिसन मागे । यो कुरा केहीअघि प्रधानमन्त्रीज्यूले थाहा पाएको पनि बाहिरिइसकेको छ । तर, तपाईंलाई बाँस्कोटाले उक्त अडियो फेक भएको बताए । तपाईं पत्याएर चुप बस्नुभयो ।
सरकार बनेदेखि नै तपाईंका दुईवटा विषयलाई जनताले सधैँ साथ दिए । पहिलो तपाईंको नारा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ र दोस्रो तपाईंको सदावहार अडान– म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ ।
तर, तपाईंको प्रवक्ताले तपाईंको नाककै अघि करोडौँ रुपैयाँको बार्गेनिङ गरे, त्यो पनि तपाईंकै छतमुनि बसेर । र, यो उनको अनुशासहीन कार्यको पहिलो शृङ्खला पनि होइन । पार्टीभित्रैको कुरा गर्ने हो भने पनि केहीअघि जिल्ला पार्टी एकीकरणका सन्दर्भमा असन्तुष्टि जनाउँदै काठमाडौंको तीनकुनेमा समानान्तर भेला गरे । यो पार्टीको नीतिविपरीत थियो तर तपाईं चुप लाग्नुभयो ।
मन्त्री भएपछि बाँस्कोटाले अश्लील साइट बन्द गर्नेदेखि लिएर सूचना प्रविधि विधेयकमा कठोर बन्नेसम्मका काम गर्दा आलोचना प्रधानमन्त्रीज्यूले नै खेप्नुभयो । तैपनि तपाईंले ‘क्या बात गोकुलजी’ भन्न छाड्नु भएन ।
अहिले उनले आर्थिक बार्गेनिङ गरेको भिडियो मात्र सार्वजनिक भएको छैन, अडियोमा अश्लील शब्दसमेत बोलेका छन् ।
एउटा कुरा स्मरण गराऔँ प्रधानमनत्रीज्यू ! बङ्गलादेशमा एमबीबीएस पढ्ने महिला चिकित्सकलाई मानमर्दन गर्नेगरी बोलेको आधारमा तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङलाई तपाईंले राजीनामा गराउनुभयो । धान दिवसको अवसरमा महिलामाथि अश्लील हर्कत गरेको भन्दै तपाईंकै पार्टीका कृषिमन्त्री हरि पराजुलीले पनि राजीनामा दिनुपर्‍यो ।
सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको छवि कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा भर्खरै पूर्वसभामुख बनेका कृष्णबहादुर महरालाई हेरे पुग्छ । जबर्जस्ती करणी अभियोग लागेपछि तपाईंकै सक्रियतामा महराले सभामुखबाट मात्र होइन, पार्टी सदस्यबाटै पनि हात धुनुपर्‍यो ।
यी त पुराना घटना हुन्, यसलाई सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटासँग जोड्न ढिला भइसकेको छ । समृद्ध र भ्रष्टाचाररहित समाजको कुरा गर्ने तपाईंकै मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्ताले खुलेआम कमिसन मागेको विषय सार्वजनिक हुनु नैतिक पतन मात्र होइन, गैरराजनीतिक चरित्र पनि हो ।
तपाईंको पार्टीले भोलि यो फेक अडियो भन्ला, आमसरोकार त्यसमा होइन, सरोकार नैतिकताको हो । सरकार मात्र होइन, गोकुल बाँस्कोटाको हर्कत पार्टीका लागि पनि घातक छ । यति ठूलो विवादमा मुछिँदासम्म न तपाईं बोल्नुभयो, न बाँस्कोटा नै ।
बाँस्कोटाले तपाईंका दुईवटा घरको दुरूपयोग गरे । एउटा तपाईंको निजी निवास र अर्को मन्त्रिपरिषद् । जसले तपाईंको भँडार खनेर तपाईंकै आँगन पुर्न खोज्दै छन्, तिनलाई अब काखी किन च्याप्नुहुन्छ ?
बाँस्कोटालाई तत्काल मन्त्री पद र पार्टी सदस्यबाट बर्खास्त गरेर अनुसन्धान थाल्नुहोस् । भोलि तथ्य र प्रमाणले निर्दोष पुष्टि गरे बाँस्कोटाले पनि महराले झैँ उन्मुक्ति पाइहाल्छन् । तर, सरकारका यति महत्त्वपूर्ण पदमा बसेका व्यक्तिमाथि अझै मौनता साँधियो भने तपाईंको छवि पनि धुमिल हुनेछ । पार्टीले पनि क्षति नै व्यहोर्नेछ । त्यस कारण प्रधानमन्त्रीज्यू ! मन्त्री बाँस्कोटालाई तत्काल बर्खास्त गरेर अनुसन्धान ढिला नहोस् ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन ८, २०७६, ११:४२:००